राजालाई ‘सरकार’ भन्नू ‘हजुर’ नभन्नू भनेर सिकाए | Edupatra
चर्चामा: कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
राजालाई ‘सरकार’ भन्नू ‘हजुर’ नभन्नू भनेर सिकाए
माघ १८, २०७६ धनेश्वर उपाध्याय
देवशमशेरलाई धपाएर सत्ता कब्जा गर्न सफल बनेका चन्द्रशमशेरका कारण धेरैले मुलुक त्याग्नु पर्यो । नेपालीको बाहुल्यता रहने भएकाले त्यो बखत धपाइएकाहरुको पहिलो रोजाइ हुन्थ्यो– दार्जिलिङ् । लखेटिएका देवशमशेर पनि धनकुटापछि दार्जिलिङ् नै पुगेका थिए । उ बेला दार्जिलिङ् पुगेकाहरुको फेहरिस्त नै तयार हुनसक्दछ । सहिद शुक्रराज शास्त्रीका पिता माधवराज जोशी पनि काठमाडौँ छोडेर दार्जिलिङ् जानु परेको थियो । त्यस बेलाका चर्चित साहित्यकारहरु धरणीधर कोइराला, सूर्यविक्रम ज्ञवाली पनि धपाइएकाहरुमध्ये पर्दछन् । उनीहरु पनि दार्जिलिङ् पुग्नु परेको थियो । चन्द्रशमशेरका कारण मुलुक त्याग्नु परेका कृष्णप्रसाद कोइराला (वीपी कोइरालाका पिता) भने सहर्सातिर गए ।
सत्तामाथि धावा बोल्न सक्ने डरले आफ्नै भाइ भारदारलाई उपत्यकाबाट लखेट्ने वा जोगिनका लागि आफै भाग्ने चलन सुरुदेखिकै थियो । वीरशमशेरले सत्ता कब्जा गर्दा पनि जङ्गबहादुरका सन्तान भाग्नुप¥यो ।
चन्द्रशमशेरले राणाहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरे– ए, बी र सी । झ्याइझ्याइ बाजा बजाएर आफ्नै जातभित्र गरेकाहरु ए वर्गमा वर्गीकृत गरिए । जातभित्र तर औपचारिक बिहे नगरी ल्याइएकाहरुबाट जन्मिएका सन्तान बी वर्गमा वर्गीकृत गरिए । जातभन्दा बाहिरका कन्याबाट जन्मिएका सबै सी वर्गका राणा भए । दरबारका सुसारे वा जात बाहिर मन परेकी कुनै कन्यासँग सहवास गरी जन्मिएका थुप्रै थिए सी वर्गका राणा ।
जुद्धशमशेरले पनि धपाउने अभियानलाई जारी राखे । हालको निर्वाचन आयोग रहेको भवनमा थियो चारबुर्जे दरबार । जुद्धशमशेर र चारबुर्जेका भारदारबीच सम्बन्ध त्यति सुमधुर थिएन । चारबुर्जेका मालिक थिए रुद्रशमशेर । रुद्रशमशेरलाई थपाउन अनेक दाउ खेले जुद्धशमशेरले । अन्ततः सर्वस्वसहित पाल्पामा धपाउन सफल भए । रुद्रशमशेरहरु दुईपटकसम्म धपाइएकाहरुमा पर्दछन् । रुद्रशमशेर धपाइएपछि उनका सन्तानमात्र नभई उनीसँग सम्बन्ध गाँसिएकाहरु उपत्यकामा बस्न सक्ने अवस्था रहने कुरै भएन । ती पनि धपाइए ।
कान्तिपथ निवासी ९५ वर्ष श्रीजङ्ग शाह त्यो बखतको स्मरण गर्छन्, “जुद्धशमशेरले कु गरेपछि सी क्लासका राणाजी धपाइए । म भर्खरै दरबार हाइस्कुलमा भर्ना भएको थिए । १० महिना जति भएको थियो स्कुल जान थालेको । हामीहरु जुद्धशमशेरका कारण काठमाडौँ छाड्नुपर्यो ।”
श्रीजङ्ग क्षेत्रपाटीमा जन्मिएका थिए । धपाइनु अघि श्रीजङ्गका पिता फत्तेजङ्गले क्षेत्रपाटीको सम्पत्ति बेचेर हाँडीगाँउमा बसाइ सरे । फत्तेजङ्गकी पत्नी बालकुमारी सी क्लासकी राणाजीको छोरी थिइन् । वीरशमशेरका छोरा प्रतापशमशेर फोहोरा दरबारमा बस्थे । निर्वाचन आयोगको सामुन्ने अमेरिकी दूतावास रहेको स्थानमा त्यो बेला फोहोरा दरबार थियो । फोहोरा दरबारमा हिमालको आकृति थियो । त्यसको ठिक तल पानी बग्ने पोखरी बनाइएको थियो । निकै आकर्षक थियो । नेपाल आएका विदेशी पनि त्यो हेर्न दरबार पुग्थे । फोहोरा दरबारका केटाकेटीसँग खेल्न श्रीजङ्ग पनि पुग्थे । एक दिन तत्कालीन राजा त्रिभुवन पनि त्यो पोखरी हेर्न पुगेको श्रीजङ्गले देखेका थिए ।
प्रतापशमशेरकी रानी (पत्नी) फत्तेजङ्गका नातामा फुपु पर्थिन् । त्यसैले फत्तेजङ्गको प्रतापशमशेरसँग निकट थिए । दैनिक जसो आउजाउ हुन्थ्यो । जुद्धशमशेरले प्रतापशमशेरलाई पनि टिक्न नदिएपछि उनी दार्जिलिङ्तर्फ लागे । फत्तेजङ्ग पनि परिवारका साथ प्रतापशमशेरसँगै बाहिरिए ।
दार्जिलिङ्को गभर्मेन्ट हाइस्कुलमा भर्ना भए श्रीजङ् । त्यहाँ पुगेको एक वर्षपछि त प्रतापशमशेरको निधन भयो । दार्जिलिङ् फापेन भनेर प्रतापशमशेरका परिवार जनकपुरतर्फ लाग्यो । त्यहाँ उनीहरुको बिर्ता थियो । दार्जिलिङ्को रकोटमा सानो घर लिएर फत्तेजङ्ग बसेका थिए । दार्जिलिङ्का ती दिनका स्मरण यसरी गर्छन् श्रीजङ्गले, “धरणीधर कोइराला, सूर्यविक्रम ज्ञवालीले हामीलाई पढाउँथे । उनीहरु त्यो बेला नै नामी साहित्यकार थिए । नेपाली विषय पढाउँथे । मैले स्कुल तहमा नेपाली विषय पढ्न पाएको उनीहरुसँग हो । त्यसपछि नेपाली विषय पढ्न पाइएन ।”
फत्तेजङ्ग पनि दार्जिलिङ् बस्न सकेनन् । उनी सुरुमा रघुनाथपुर पुगे । त्यसपछि कता कता पुगे । नेपालगन्जमा फत्तेजङ्गका हजुरबुबाका नाममा जग्गा थियो । उनी नेपालगन्ज पुग्ने निधो गरे । उतै घर बनाउन थाले । छोराछोरीहरुलाई चार वर्षसम्म दार्जिलिङ्मै राखे । पछि सबै छोराछोरीलाई नेपालगन्ज लिएर गए फत्तेजङ्गले । उधुम गर्मी । एउटा छोरा र एउटी छोरीको निधन भएपछि डरले फत्तेजङ्गले श्रीजङ्गलाई बनारस पठाइदिए । उनी सेन्टर हिन्दू हाइस्कुलमा भर्ना भए । नेपालगन्जमा रहँदा घरमै पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।
भारतको पढाइ । सबै विषय भारतीय । इतिहास भारतकै पढ्नुपथ्र्याे । भूगोल भारतकै पढ्नुपथ्र्याे । नेपालका बारेमा अनभिज्ञ थिए उनी । भारतीय इतिहास, भाषा, संस्कृति, भूगोल पढे । मेट्रिक दिए । पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । फत्तेजङ्गले औपचारिक शिक्षा नलिए पनि छोराछोरीलाई पढाउन चाहन्थे । श्रीजङ्ग कलकत्ता विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । उनले त्यहीबाट आइएदेखि एमएसम्म पढे । त्यो बेला कलेज शुल्क मुस्किलले २५ रुपियाँ लाग्ने गरेको उनी स्मरण गर्छन् ।
कलकत्तामा हरेक आइतबार छुट्टी । छुट्टीको सदुपयोग उनले ब्याटमिन्टन खेलेर गर्ने गरेका थिए । उनीहरु कलकत्तामा पढ्दा सुवर्णशमशेरका घरमा ब्याटमिन्टन खेल्न जान्थे । सुवर्णका छोरासँग उनीहरुको मित्रता थियो । “त्यही वीपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता थुप्रै नेता आउँथे । हामीले हेथ्र्याैँ । फलानो फलानो भन्थे” उनले भने, “कुनै बोलचाल हुन्थेन ।” त्यहाँ अध्ययन गर्ने सबै नेपाली विद्यार्थी राणा विरोधी थिए । खुलारुपमा सबैले अभिव्यक्त गर्न नसके पनि एकले अर्कालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्थे । तर भित्रभित्रै सबै राणका विरोधी । पढाइ पूरा भएपछि उनी नेपालगन्ज फर्किए । उनी बाबु फत्तेजङ्गलाई खेतीपातीमा सघाउने गरेका थिए ।
पाल्पा निवासी डा. त्रिवेणीप्रसाद प्रधान नेपालगन्जमै प्राक्टिस गर्थे । उनीसँग बीपीको राम्रो सम्बन्ध थियो । श्रीजङ्गको पनि उनीसँग निकट सम्बन्ध थियो । डा. तुलसी गिरी र डा. त्रिवेणीलाई वीपीका दाहिने र देब्रे हात भन्थे त्यो बेला । डा. त्रिवेणीले रोजगारीका सन्दर्भमा वीपीसँग भेटाइदिन खोजे । पढेका मानिस कम थिए । नेपालगन्जमा बसेर के गर्छाैँ काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेटाइदिन्छु भनेपछि श्रीजङ्ग काठमाडौँ आइपुगे । जाडोको महिना थियो । बेलुका ७ बजेको समय दिइएको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित गेष्ट हाउस नै प्रधानमन्त्रीको आवासीय भवन थियो । “म त्यहाँ जाँदा वीपी आइसकेका थिएनन् । मलाई लगेर ड्रइङ्ग रुपमा राखे । १५ मिनेटपछि दुई तीन वटा मोटर आए । प्रधानमन्त्री आएको हुनुपर्दछ भनेर मनमा लाग्यो । नभन्दै उनी आएका रहेछन् । सिधै उनी माथि गए । त्रिवेणी पनि साथै थिए । म आयो कि आएन भनेर ड्रइङ्गरुममा हेर्न त्रिवेणी आइपुगे । मलाई देखेपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिदिएको छु भनेर उनी हिँडे” उनले थपे, “१५ मिनेटपछि वीपीका सचिव आइपुगे । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ भनेर माथि लगे । वीपी सिरक ओढेर बसिरहेका थिए । म मेचमा बसे । के छ, कस्तो छौँ भनेर सोधे । कलकत्तामा सुवर्णशमशेरलाई कस्तो मान्छन् भन्ने लगायतका सोधे तर त्यो भेटले रोजगारीका कुनै कुरा भएनन् । न त उनले यही बसेर काम गर भने । म नेपालगन्ज फर्किए ।”
नेपालगन्जमा बसिरहेका थिए । एक दिन बडाहाकिम बद्रीविक्रम थापाले काठमाडौँ जान भने । राजा थिए महेन्द्र । उनले जिल्लाहरुबाट पढे लेखेका मानिस पठाइदिनू भनेर बडाहाकिमहरुलाई आदेश दिएका रहेछन् । बद्रीविक्रमलाई पनि थाहा थियो कि श्रीजङ्ग स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका छन् भन्ने । काठमाडौँ आइपुगेपछि नारायणहिटी दरबार पुगे उनी । “त्यहाँ अरु जिल्लाबाट पनि बोलाएका रहेछन् । पढे लेखेका मानिसलाई मात्र झिाएका रहेछन्” उनले भने, “राजाका सामुन्ने लैजानुभन्दा पहिले त्यहाँका कर्मचारीले सिकाए । भित्र गएर राजालाई सरकार भन्नू, हजुर नभन्नू, बोलेपछि यस्तो गर्नु उसो गर्नु भनेर सिकाए । भित्र गएपछि राजाका सामुन्ने उभिन लगाए । राजा बसेका थिए । त्यो मानिसले हामीलाई कुहिनोमाथि समाएर त्यहाँ पुर्याएका थिए । राजाले मेरा बारेमा सोधे ।”
राजासँग कुराकानी गरेको लगत्तै उनलाई नेपाल राष्ट्र बैँकमा निर्देशक बनाइएको खबर आयो । नेराबैँक नयाँसडकको रैनबसेरा भन्ने घरमा थियो । पछि थापाथलीको सिंहमहलमा सर्यो । त्यो बेला राष्ट्र बैँकमा मेच टेबुल थिएन, हात टेकेर चकटीमा बसेर लेख्नुपथ्र्याे भनी उनी सम्झन्छन् ।
उनलाई जीवनमा दुई कुराले अझै पनि थकथक लाग्ने गरेको छ । एउटा दरबार हाइस्कुलमा पढ्न नपाउनु र अर्काे शिक्षा क्षेत्रमा लाग्न नसक्नु । “म शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुन्छु भन्ने पहिलेदेखि नै सपना देख्थे” उनले भने, “तर इच्छा पूरा भएन । सोचेको मात्र नहुने रहेछ ।” नेपाल राष्ट्र बैँकमा डेपुटी र अल्टरनेट गभर्नर बनेका उनले आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा विताए ।
Tags: स्तम्भ उ बेला
वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै सरकार (समय तालिका सहित)
विद्यालय सञ्चालनका लागि सरोकारवालासंग छलफल गर्दै मन्त्रालय
परीक्षा अन्योलमा, विकल्पको खोजीमा त्रिवि
कोरोनाको चुनौती शैक्षिक रुपान्तरणका लागि अवसर बन्न सक्नेः राजदुत बोन्नी